Noma yikuphi ubuhlobo phakathi komfana nentombazane kungase kuphulwe phansi ngezigaba. Isiteji sokuqala sithandana, lapho ubudlelwane buhlanganiswa nokuthandana nokujabula. Lapho ngifuna ukuba ngukuhlwa nobusuku. Isigaba sesibili yisigaba sokulindela kanye nekhono lokunciphisa. Kule nkathi, ubunzima bokuqala ebuhlotsheni buqala.
Kususwe ukuhlelwa kozakwethu. Amaski kanye neqiniso lomuntu zisuswe kubonakala kungekhona kweso elihlomile. Isigaba sesithathu ngumzabalazo wamandla. Uma ungahambisani kahle nensimu, ungaba esimweni esiseduze. Kulesi simo, akulona lolo thando, kodwa ngisho nojwayelene nesoka lakho ngeke uwuthole.
Njengoba unqobe indoda, udinga ukuhlala ufana nawe, uzama ukumnqoba, hhayi okuvamile. Ngakho ngiyeluleka izazi ze-psychologists uma zisondela usizo. Isigaba socansi lokukhulumisana phakathi kwendoda nentombazane kungenye yezihloko ezinzima kakhulu zokuziqonda. Kukho enye indawo yokuphila komuntu kunamanzi amaningi angaphansi kwamanzi namatshe njengasesebulili. Ubuhlobo babantu abangenabo ucansi abuhambisani. Igama elithi "ukungena ocansini", okusho ukuthi "ngaphandle kocansi" lafika kithi kusukela olimini lwesiNgisi futhi lwasetshenziswa ngentshisekelo ezingxoxweni ezithinta abezindaba, kumasayithi e-intanethi, kufaka phakathi idayari ezibuhlungu.
Ukuziqeda noma ukungabi namuntu, empilweni yethu, i-vesh ayiyona eyingqayizivele, kodwa ngokufanayo iyingozi, kokubili amadoda nabesifazane. Kulabo besifazane, ngenxa yokwehla kwegazi emagqumeni, izinkinga zezinkinga zokuhlala kanye nokuhlala zivela ezinkingeni ezingokwenkolo ezingaxazululwa zingase ziphakame. Emadodeni, izinguquko ku-prostate gland, ukuhlaselwa kwezikebhe, okuholela ekunciphiseni kwamanzi, kungenzeka. Ukuziqeda ngokuvamile kuholela ekucindezelekeni, ukucasula nokuphazamiseka kwemizwa. Njengoba uFrud esho, "konke ukuhlupheka nokuhlupheka kuncane kwezinye izindawo zokuphila."
Izimbangela zokuzigcina ucansi zingasethwa, ukukhathala, ukucindezeleka, ukugula, ibanga. Kodwa ngandlela-thile konke lokhu kuyanyamalala futhi ngifuna ukuzijabulisa okuyisisekelo - ukwenza ucansi. Bathi abesifazane balula kakhulu kule ndaba, ngoba umsebenzi osebenzayo, ikakhulukazi ungowesilisa. Futhi wazi kanjani ukuthi umfana akazange abe nentombi isikhathi eside? Okokuqala, lokhu kubonakala ekuziphatheni. Okwesibili, la madoda ngemuva kokuyeka ukuzibandakanya kwezocansi kanye nobuhlobo ngokujwayelekile, njengokuthi kukhona isifiso esikhulu, kodwa asisebenzi ngesikhathi esifanayo.
Isizathu silula - njengabadlali abayeke ukuqeqeshwa okwesikhashana, ngeke bakwazi ukushaya irekhodi labo. Ngezikhathi ezinjalo, amadoda asengozini kakhulu futhi adinga usizo lokubuyisela amandla abo ngaphambilini. Bangasiza kuphela intombazane eqonda, ethanda, kodwa kufanele uyikhumbule. Ukuthi ezimweni ezinjalo akunakwenzeka ukusheshisa. Umfana udinga induduzo ngokomzimba nangokwengqondo. Kungaba kufanelekile ukuba ube nesidlo sokuthandana namakhandlela, nengxoxo ejulile. Njenganini ngaphambili, ama-caresses okuthintayo ayadingeka, ngaphezu kokujwayelekile. Ngisho noma lesi sikhathi asikho okwenzeka kumuntu, ungathukutheli. Zibophezele, uhlele izigcawu zezinyembezi namahlaya, amahlazo nokwenza konke okwenzekayo inkinga. Kuze kube manje, akukho okwesabekile okwenzekile. Namuhla akaphumelelanga, kusho ukuthi kuzoba kusasa noma ngosuku olulandelayo kusasa. Into esemqoka akukona ukwenza inkinga ngaphandle kwalokhu. Kodwa ukuthula nenjabulo akufanele yini umzamo?
Uma ngabe i-psyche ihlelekile, ngakho-ke kuyadingeka ukuthi ucabange ngempilo engokwenyama. Emagameni athi "nokuthi umfana wayengazange abe nentombazane isikhathi esingakanani" akazange ahlale esazi. Ngemuva kwalokho, ukuziyeka noma ukungenasici, kamuva, kuvame ukuholela ocansini njalo, futhi ngezinye izikhathi ngisho nangokwemvelo. Ngakho-ke khetha wena ukuthi yini engcono kakhulu!
Kuthiwani uma umyeni wami engafuni ingane?
Indoda iziphatha kanjani ngemva kwesahlukaniso?
Inyanga yesishiyagalolunye yokuphila kwengane
Itafula lekhofi endlini yakho
Indlela engcono kakhulu yokwandisa impilo
Amapayipi nge-saumoni nemifino
Ubuthakathaka kanye nobuphofu: umzabalazo wokubaluleka
Iphunga elimnandi lomswakama
Ukuhamba nokuphila okunempilo
Izindlela zokupheka kunazo zonke futhi ezilula zokudla
Umfanekiso wesifazane ozimele oqinile ezweni lanamuhla
I-Disorder ekamelweni ukusuka endaweni yokubuka kwengqondo